Nokwesaba izakhiwo ingasetshenziswa ukuze inzuzo yakho. Indlela yokubhekana nokukhathazeka nokungaqiniseki?
Kukangaki sizithola esimweni ongaziwa noma ezingathandeki ukuze uhlangabezana ukukhathazeka noma ukwesaba. Indlela yokubhekana nokukhathazeka? Le nqubo mhlawumbe akulula kangako ngenxa imikhuba yethu aqine.
Ngisho boldest lethu kwezinye izimo alahlekelwe ukuzimelela kwakhe. ucabanga ngemizwa enamandla evame ukubuzwa yibo bonke abantu. Ngokusho odokotela bengqondo, besaba lutho schizophrenics kuphela. Ngenxa yalokhu, le embi kakhulu kuba umbuzo indlela yokubhekana nokukhathazeka, ngesikhathi esifanele wokunxusa bonke amabutho futhi wenze isinqumo esifanele. Umthelela ongemuhle ngenxa yokwesaba
Umthelela ongemuhle yokwesaba phezu Enough womuntu wathi. Kaningi kuyenzeka ukuthi ngesikhathi injabulo enkulu, sisuke ukukhulula isimo esandleni, zisakwazi bese beveza necebo ulwe umuzwa Onqobayo bengayi. Futhi thina asikwazi. Ngeke ukwazi nje asinaki ingozi futhi engathí sina.
Ukwesaba ibulala umuntu njengoba umuntu avale ithuba iSilekeleli Sokwazisa. Zingaki izikhathi kwenzeka ukuthi ngesikhathi esiqongweni isimo ngaphansi kwethonya injabulo kanye lezimanga, thina saphela sokuthatha isinyathelo esiwujuqu? A ukubambezeleka Ezimweni ezinjalo ezifana ukufa, lapha nalaphaya e umlando wethu unguJehova oyedwa iphupho zingafezeki noma ithemba elahlekile.
kungenziwa ngokuthi preconditions eziyisisekelo besaba ezilandelayo:
1. Ukwesaba ukusho okuningi kakhulu.
2. Ukulahlekelwa ithemba esimweni engajwayelekile.
3. injabulo phambi zonke izinyathelo wemfanelo.
Konke okungenhla kwenza kube nokwenzeka ukuba sesabe ukuhlasela ubuchopho bethu, okuholela kancane nokucekelwa phansi ngazinye. Asikwazi nesibindi futhi ngesibindi ngoba ukwesaba igxilile kithi, kunikeza ubuchopho isignali ingozi. Kunokuba ukwenza isenzo, sithobeke, senze ngokuvumelana nezimo futhi baqala ukuzulazula. Kungani? Yebo, ngoba kakhudlwana, ngakho ukwenza zonke, ngakho-ke ngeke kube okungafaneleki. Yingakho ukwazi indlela yokubhekana nokukhathazeka, kuba nesidingo.
Umthelela omuhle ngenxa yokwesaba Isimanga siwukuthi kodwa nokusaba kungaba wusizo. Phela, lo mzalwane wasiza okhokho bethu ukuze usinde ezikhathini zasendulo. Khona-ke nokwesaba kwathi umsizi, ekusizeni sikulindele ekuhlaseleni nesilwane, futhi yekwatisa wonke amabutho ukuze alwe naye. Wonke umuntu uyazi ukuthi phakathi nenkonzo ukwesaba umuntu angakwazi ukwenza izenzo ezinjalo, okuyinto esimweni esejwayelekile ke akanawo amandla. Ngenxa yokwesaba - kuba ivuselela, owenza usebenze zonke izakhiwo okuvikela umzimba.
Ukusebenzisa kahle ukwesaba, udinga lutho nhlobo: ayeke ukuzama ukuzivumelanisa imibono yabanye. Khona-ke akudingeki ezikudidayo phezu umbuzo indlela yokubhekana nokukhathazeka. Sidinga ukunika ngokwakho ilungelo kube yilokho esiyikho, akukhona yini lokho esikufunayo ukubona nengangibajwayele, abangane, nokunye. Lutho kuyofika yemizamo yethu ukuba sengathi othile. Awukwazi ukudlala kuze kube phakade. Ngakho, kuphakama yokwesaba lasuka embonweni wokuthi asikwazi ukuqeda kuze kube sekupheleni indima yayo. Kodwa indoda yangempela is ezazithandwa ubuntu bayo njengoba Psychology izimangalo. Futhi akuyona isicelo kanye psychology esisebenzayo, osekelwe kokuhlangenwe nakho, ucwaningo, nokuhlola ngokwenza.
Ukuze sinqobe ukwesaba, akudingeki ukuba ufihle kuwo, bese ukuhambisa ngakuye. Ukudlala naye kusengaphambili. Indlela yokubhekana nokukhathazeka ngesikhathi umdlalo? Ayikho indlela! Wena nje ukuthola isibindi futhi uthathe isinyathelo naphezu kokwesaba nesasasa. Khumbula: kunzima sokuwelela izinhlelo zabo ngokokuqala ke kuyoba lula kakhulu, futhi ngenxa yalokho uzothola hhayi kuphela ukuzihlonipha nenhlonipho yabanye, kodwa futhi ukuze uvule khathizwe impilo entsha ezibonakala linesikhathi eside likhona.
Izimfanelo ezinhle umuntu: ohlwini
Ukumamatheka Izihambi (Duchenne ukumamatheka). Kanjani ukuze ufunde ukumamatheka amehlo
Ingane ene ASD: izici yentuthuko ngokwengqondo
Isiphakamiso - ke ... Izinqubo yesiphakamiso
"Ikhekhe" - isepha, i-gel yokugeza, idayodorant
Indlela Yokwenza Incwadi ngezandla zabo - imfundo Wabasaqalayo
Ukubolekisa Commercial: izicupho ngoba ababoleka ongaqaphile
Kanjani ukuze ome nail sula. Iphele isibane gel nail sula
Tree-kangaroo - isilwane emangalisayo
Uhawukele: ezikhulayo ekhaya